Bogga ugu weyn » Hotelada & Dalxiiska Wararka » Kooxda Selo waxay ku xoojineysaa bulshooyinka maxalliga ah barmaamij cusub oo ecommerce ah
Kooxda Selo waxay ku xoojineysaa bulshooyinka maxalliga ah barmaamij cusub oo ecommerce ah
Websaydhka cusub ee shirkadda horumarinta ee loo yaqaan 'Selo Footprints' ayaa sharraxaad ka bixinaya ganacsiyada yaryar ee Indooniisiya ah iyada oo qayb ka ah hanaankeeda diiradda bulshada.
Doorka ay farshaxanleyda maxalliga ah iyo ganacsatadu ku leeyihiin dhaqaalaha aad ayey muhiim u yihiin.
Selo waxay abuurtay madal lagu taageerayo ganacsiyada yaryar ee tirada yar kuwaas oo gacan ka geysta dhaqanka iyo dhaqaalaha firfircoon ee gobolka.
Cudurka faafa ee coronavirus wuxuu haleelay meheradaha yar yar ee bulshada maxalliga ah ee Bali iyo wixii ka baxsan taas oo si weyn ugu tiirsan dalxiiska gaar ahaan adag.
Selo Group, oo ah shirkad abaalmarin ku guuleysatay oo si buuxda isku dhafan oo horumarineed oo fadhigeedu yahay Singapore, waxay awood siineysaa bulshada reer Indonesia iyada oo la bilaabayo boggeeda cusub ee e-commerce, www.selofootprints.org. Fahmitaanka doorka muhiimka ah ee fanaaniinta maxalliga ah iyo ganacsatadu ay ciyaaraan, Selo waxay abuurtay barnaamijkan si ay ucaawiso ganacsiyada yaryar ee tirada yar kuwaas oo gacan ka geysta dhaqanka iyo dhaqaalaha firfircoon ee gobolka.
"Inkasta oo qof walba oo adduunka ku nool uu si uun u dareemay saamaynta cudurka faafa ee coronavirus, haddana ganacsiga yar yar ee bulshada maxalliga ah ee Bali iyo wixii ka baxsan oo si weyn ugu tiirsan dalxiiska ayaa si gaar ah u saameeyay," ayuu yiri Andrew Corkery, oo ah madaxa shirkadda Selo Group. Dukaameysiga maxalliga ah wuxuu taageeraa joogtaynta, wuxuu dhisaa niyadda bulshada wuxuuna u abuuraa fursado dhaqaale qof walba. Selo, hamiga aan u qabno bulshada iyo horumarka dib u soo nooleynta ayaa nagu dhiiri geliyay in aan kor u qaadno ganacsiyada maxalliga ah ee Indooniisiyaanka ah ee bixiya alaabada cajiibka ah. ”
Websaytka ganacsiga ee Selo ee 'Selo Footprints' wuxuu soo bandhigayaa xulashooyin kala duwan oo loo heli karo gaarsiinta meel kasta oo adduunka ah, laga soo bilaabo badeecadaha bulshada iyo iskaashi lala yeesho ganacsiyada bey'ada u fiican ilaa waxyaabaha bakhaarrada macaan sida saxmada iyo keydinta Wax soo saarkan waxaa gacanta ku farsameeya farsamayaqaannada maxalliga ah ee Indooniisiya, oo ay ka mid yihiin Vividerm, Kaas oo ka kooban waxyaabo dabiici ah oo qorraxda ka soo baxa oo aan ku jirin kiimikooyin waxyeello leh, iyo Yanami Juan Hoyga iyo Gallery, kaas oo lagu dabaqayo rinjiyeyaasha bacaha dushooda, garbasaarrada, iyo waxyaabaha kale. Dukaamleyda ayaa sidoo kale heli kara dhar, alaabada fayoobaanta iyo qalabka isboortiga oo ay farsameeyaan farsamayaqaannada maxalliga ah, oo ay ku jiraan rullaluistemadka dusha sare ee bamboo-gacmeedka loogu talagalay is-duugista isboortiga ka dib.
Abuureyaashan iyo qaar badan oo ka mid ahi waa qaybo muhiim u ah dharka bulshada deegaanka ee Indooniisiya. Tusaale ahaan, Du Anyam waxay kor u qaadeysaa dhaqanka khafiifka ah ee farsamada-farshaxanka ee haweenka hibada u leh dadka ku nool agagaarka Indonesia iyo qaybaha kale ee adduunka. Shirkaddu waxay ku dadaaleysaa inay qayb ka noqoto xoojinta haweenkan iyadoo ka caawineysa inay xakameeyaan dakhliga qoyskooda, taasoo keentay isbeddel wanaagsan oo looga baxsado saboolnimada. Tuulada Dooxada Sembalun ee Bariga Lombok, Sembahulun Handmade waxay awood siisaa haweenka waxayna abuurtaa alaabada gacmaha lagu sameeyo oo ka sameysan dharka gacmaha lagu xidho iyadoo la isticmaalayo midabbo dabiici ah. Cawani, oo ka dhigta keydka miraha kuleylka ah ee abaalmarinta caalamiga ah ee Bali, ilo miraha kuleylaha ugu fiican ee laga helo beeraleyda lagu kalsoon yahay ee ku baahsan Indonesia waxayna ku ilaalisaa gacanta. Shirkaddu waxay taageertaa farsamayaqaannada reer Balinese iyagoo ku baakadeeya hadiyadohooda cuntada leh gacmo farshaxan gacmeed lagu dubto iyo dambiilo.
Iyada oo qayb ka ah dadaalkeeda dib-u-cusboonaysiinta socda, Selo waxay sidoo kale la midowday noocyo leh aalado anshax iyo waaritaan ku leh Indonesia sida Coconesia, Pinalo, Vividerm, IndoSole iyo Awani. Websaydhada 'Selo Footprints' wuxuu soo bandhigayaa wax soo saarkooda qiime jaban waxayna u oggolaaneysaa iibsadayaasha inay u diraan faa'iidada mid ka mid ah aasaaska hay'adaha aan macaash doonka ahayn ee la oggolaaday.
Iyada oo ay leedahay Barnaamijka Saadaasha Selo, Selo Group waxay si adag u shaqeyneysay in ka badan 12 sano si ay u taageerto bulshooyinka ku dhex nool Indonesia. Waxay bixiyaan shaqooyin waara si loo kiciyo koritaanka loona hagaajiyo habnololeedka miyiga ee Selong Belanak Lombok, sidoo kale waxay bixiyaan taageero dadaallada gargaarka musiibada. Shirkaddu waxay isku duweysaa kana qeyb qaadataa nadaafadda xeebta, waxay taageertaa iskuulada maxalliga ah iyadoo la aasaasayo naadiyo isboorti isla markaana la siinayo kaabayaasha muhiimka ah sida taangiyada biyaha iyo internetka, waxayna xubin ka tahay Selong Belanak Community association, oo diiradda saaraya joogtaynta deegaanka, maaraynta qashinka, horumarinta bulshada.
Websaydhada ecommerce ee Selo waxay ka bilaabmi doontaa Indonesia laga bilaabo Juun wixii ka dambeeya, iyada oo qorshuhu yahay in la ballaariyo suuqyada dibedda illaa Q3, 2021. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Selo Group iyo barnaamijkeeda ecommerce, fadlan booqo www.selogroup.co iyo www.selofootprints.org.
Ku saabsan Selo Group
Kooxda Selo waxay leedahay rikoodh la xaqiijiyay oo ah tayada dhismaha, jaa'isadaha raaxada ee abaalmarinta lagu helo iyo villa-yada waqtigii loogu talagalay iyo miisaaniyadda, heerarka caalamiga ah ee ugu sarreeya. Qaabka ganacsiga waxaa lagu dhisay hareeraha helitaanka, horumarka, iyo howlgalka. Kooxda caalamiga ah ee khibradda u leh shirkadda ayaa kormeera naqshadeynta, iibinta guryaha iyo suuqgeynta, dhismaha, iyo hoteellada iyo howlaha dalxiis. Selo Group waxay bixisaa noocyo kala duwan oo horumarineed, dhismo, hawlgallo, iyo adeegyo maareyn ah, kormeerida mashaariicda bilow ilaa dhammaad leh xoog leh ka go'naanta joogtaynta. Iyada oo loo marayo isdhexgalka tooska ah, kooxdu waxay ku qabataa waxtarka naqshadeynta, iibinta iyo toosinta dhismaha ee ku soo jiidaneysa meelaha lagu shaqeeyo. Tikniyoolajiyadda cagaaran ee Selo iyo naqshadeynta waxay muujinayaan sida ay uga go'an tahay mabaadi'da waarta hababka dhismaheeda, howlaha gudaha, iyo la shaqeynta bulshada maxalliga ah iyo deegaanka dabiiciga ah.